Nzira yekuwedzera Amazon kutengesa uye kuva mutengesi yakanakisisa?
Mumazuva edu, Amazon ndiyo inonyanya kutengesa mutengesi weInternet apo iwe unogona kuwana zvigadzirwa zvezvinhu zvose. Ichi chikwata chinopa mikana yakanaka yevatengesi nevatengesi vatatu. Kana iwe uine nzira yakanakisisa yekutengeserana kwebhizimisi rako, Amazon ichakurumbidza iwe nepamusoro mari uye NOKUDZIRA nzvimbo.
Kuzivikanwa kweAmazon retailing platform kunoramba kuchikwira zuva rega rega, kutowedzera vatengi vakawanda vakatendeka. Maererano nehuwandu hwemashoko, zvinodarika $ 88,000 zvinoshandiswa muminiti yose pasi pose pachikuva. Vatengesi vanoteka Amazon senzvimbo apo vanogona kuwana zvose, kunyange kupfuura paGoogle - uriage creme lavante surgras. Google ichine chinyorwa chinokosha, asi kuti uwane ruzivo, kwete vatsvakurudzi vezvibereko.
Nezvose zvinotaurwa, ndinofunga kuti ichange iri pfungwa yakanaka yekugoverana newe mamwe mazano ekuwedzera Amazon sales uye kuvandudza nzvimbo yako yepamusoro. Saka, regai tinyatsoongorora mazano aya anobatsira uye mazano.
Nzira dzekuwedzera Amazon kutengesa
Ita mazano akanaka kuAmazon
Simba rekuongororwa kwevashandi paAmazon haigoni kufungidzirwa. Ivo vane chinonyanya kukosha pane zvaunonyanya kutarisa pa Amazon tsvaga peji yevhesi uye inogona kuvandudza kana kuparadza kwako maitiro ekugadzirisa. Maererano nevashambadzi vezviitiko vemazuva ano, 88% yevashandi vanoti vanovimba nhaurirano yeIndaneti zvakadai sekuronga kwevanhu uye vanogadzira kutenga kwavo kusarudza zvichienderana nenhamba nehutano hwekuongorora kwechangobva kuitika uye nyeredzi yepamusoro.
Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuita zvose zvaunokwanisa kuti uite hutano uye maitiro ehupenyu pane zvigadzirwa zvako. Kuongororwa nevhidhiyo zviri mumifananidzo kana zvifananidzo zvinogona kushanda zvishamiso. Saka, kukurudzira vatengi vako nguva dzose kuti vabve maitiro akareba uye anotsanangura kuti vabatsire vamwe vatengi vanoita chisarudzo chakanaka. Kana uchiziva vanhu vomunharaunda iyo vakafarira chigadzirwa chako, enda kwavari uye mubvunze nezvekudzoka kwekuongorora.
Zvisinei, unofanirwa kuziva kuti Amazon iri kurwisana nematambudziko asiri maitiro, kana mune mamwe mazwi, kuongorora kwakagadziriswa. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti maitiro ako ezvigadzirwa zvakasikwa zvakaenzana uye anotarisa zvakasikwa.
Kuchengeta zvose zvekuongorora kwechigadzirwa uye kugara uchiziva nezvekusava nemafungiro asina kunaka, unogona kushandisa shanduro yakakosha yechinangwa ichi. Semuenzaniso, Feedback Five-tool inobatsira kuwedzera yakawanda yemhinduro yakapiwa uye pakarepo inopindura pamusana pemhinduro dzisina kunaka.
Shandisa paunongedzera kuwedzera nekuvandudza
Amazon ranking system inotarisa kwete kwete chete mutengo mazano, mutengesi wezvokutengesa, uye mutengo, asiwo nzira iyo marongerwo emiganhu yakarongwa sei. Kufanana neGoogle, unoda kugadzirisa zvinhu zvinosanganisira zvinotsvaga kutsvaga mazwi mumusoro, zvinyorwa, uye tsanangudzo. Amazon inopa vatengesi vane mukana wekupinza musoro wechigadzirwa nemashoko akakodzera ekutsvaga uye mazwi anotsanangura. Iyi nhamba yeAmazonist yakagadzirisa kushanda yakasiyana neGoogle apo iwe unoda kuva nekfupi uye chinyorwa chaiyo neyo chete inotsvaga kutsvakurudza izwi iri mairi. Zvisinei, Amazon inoda kuita kuti zvigadziriswe nzira yekutsvaga mabhodhi nevashandisi, vachivapa netsanangudzo yakajeka yomushandi panguva imwe chete. Amazon inoratidza kuti inosanganisira zvinhu zvinotevera zvinoshandiswa muhurukuro: marati, tsanangudzo, mutsara wechigadzirwa, zvinhu, ruvara, ukuru, uye huwandu. Zvisinei, hapana chikonzero chekuisa mutengo uye zvinyorwa zvekutsvaga muhurukuro yako yekuita vatengesi kuisa pfungwa pamashoko ekutanga.
Kuti uwane zvakakosha uye zvinotsvaga kutsvaga mazita ako, ndinokuraira kuti ushandise Amazon Keyword tool, iyo inoshandisa mavhidhiyo eAcocomplete service kuti iwane yakareba yakareba mutsara mazwi. Uyezve, uchishandisa chigadzirwa ichi, unogona kuongorora kutsvaga kwevhesi yeshoko rimwe nerimwe rakasarudzwa.
Nzira dzekukunda Bhokisi Rekushandisa muAmazon
Amazon inonyanya kukwikwidza nzvimbo yekutsvaga iyo inogona kutengesa zvakanakisisa kana kutora Buy Box; iwe unofanirwa kuva nekutengeserana kwenhoroondo yepamusoro uye purogiramu yemitambo yekukwikwidza. Amazon haina kupa mitemo yakasimba yekuti ungakunda sei Bhokisi reNotoro, asi pane zvinhu zvizhinji zvinowanzozivikanwa kuti zvinogona kuchinja kukwanisa kwako kukunda.
Chokutanga, unofanirwa kuita kuti uwedzere kutenga Bhokisi rekushandisa kukodzera. Kuti uite kudaro, unofanirwa kuva nekambani yeruzivo yekutengesa uye kutengesa zvinhu zvako kwemwedzi mitatu. Imwe nzira iyo iwe unogona kuvandudza nayo ndeyokushandisa mazai eAmazon kuzadziswa.
Zvakare, kuti uwane Amazon Buy Box, unofanira kuva nehupamhi hwepamusoro. Iyo yepamusoro-nharaunda inogona kugadziriswa nezvinhu zvakadai senhau yekutengesa zvakabudirira, mazano akanaka emakambani, maitiro akanaka kwazvo emametric, uye kushandiswa kwehutano hwehutano.
Kunyanya kukoshesa kunofanira kubhadharwa pamutengo wako wakatarwa (iyo chaiyo yekutengesa nemari yekubhadhara). Kuti urambe uchikwikwidzana munharaunda yako, iwe unofanirwa kutarisa kushandiswa kwekisikiti yemakethe kana kushandisa shanduro dzakakosha dzokushandisa zvakadai se FeedVisitor kana Teikametricks. Zvishandiso izvi zvichakubatsira iwe pakarepo kuongorora mutengo wezvinhu zvakabatana zviri mumisika yako yekutengesa. Uchishandisa chirongwa ichi, uchakwanisa kuita zvese zvinoshandiswa pamitemo yako yekutengesa chero nguva iwe paunoona mumwe munhu anopa kuderedza mutengo iwe une.
Pay Per Click Kuratidza ku Amazon
Kana uchida kuwedzera purofiti yako kuAmazon, edza Amazon inotsigirwa purogiramu. Ichakubatsira kuti uratidze zvinhu zvako pasi pemigumisiro yekutsvaga, muruoko rworudyi-mutsara kana pamapeji akazara. Amazon PPC inzira yakanaka yevatengesi vekuInternet kutenga nzvimbo panzvimbo yeExper's search results. Maererano nepurogiramu iyi, mutengesi anofanira kuripa nguva imwechete apo mutengi achinyanidza pane chiyeuchidzo mumigumisiro yekutsvaga. Kana ukanyanya kukukwikwidza iwe unotengesa, iyo yapamusoro yekutora iwe uchada kubhadhara.
Kutengesa mazano paAmazambique platform
Maitiro akadaro ekukurukurirana nevatengi semadanidzi akakurumbira uye kutengesa email zvakabvumirwa kuAmazon. Zvisinei, hazvirevi kuti iwe haugoni kushandisa chero humwe nzira dzekutsvaga kutora vatengesi kuchitoro chako cheAmazon. Iwe unogona kushandisa bhodhi kutumira uye kushamwaridzana kwemashoko evanhu kuti zvibudirire izvi. Uyezve, iwe unogona kuumba bhaibheri rako rinoenderana nebhizimisi rako. Nzvimbo dzakadai seQuora, Hubpages, uye Go Nyaya idziwo nzvimbo yakanaka yekunyora zvidimbu zvehupenyu pamusoro pehurukuro yako, kwaunogona kusiya chibvumirano pachitoro chako cheAmazon.